ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပြင်သစ်ဘောလုံးကစားသမား Allan Saint-Maximin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
LB "ဟုအမည်ပြောင်နှင့်အတူဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်စိန့်မက်စ်“ ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများသည်သင့်ကလေးဘ ၀ မှယနေ့အထိထင်ရှားသောအဖြစ်အပျက်များကိုမှတ်တမ်းတင်စေသည်။
Alan Saint-Maximin ၏ဘဝနှင့်ထမြောက်ခြင်း။ Image Credits: ChronicleLive, 90Min, Twitter နှင့် GetFootballNewsFrance
ဟုတ်တယ်၊ စိန့်မက်ကမင်မင်ဟာတစ်ခြားအရာတစ်ခုသိတယ်။ ကွင်းထဲရှိအရှိန်အဟုန်၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လှည့်စားမှုများကဘောလုံးပရိသတ်များကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ သို့သော်လက်အနည်းငယ်သာ Allan Saint-Maximin ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုအတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ရဲ့စတင်ကြကုန်အံ့။
Allan Saint-Maximin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မိသားစုနောက်ခံနဲ့အစောပိုင်းဘဝ
မိမိအပြည့်အဝအမည်များ, နေကြသည်ကိုချွတ်စတင်ခြင်း Saint-Maximin အယ်လန်။ သူသည်မတ်လ 12 ၏ 1997 နေ့တွင်သူ့အမေNadège Saint-Maximin နှင့်ဖခင်အဲလက်စ်စိန့်မက်မက်ဆင်တို့ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်အနောက်တောင်ဘက်ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များမှမွေးဖွားခဲ့သည်။
သူ့အစ်ကိုတွေလိုပဲ; သောမတ်စ် Lemar, သီယာရီအွန်နရီ, Dimitri Payet နှင့် Kingsley Coman, ပြင်သစ်လူကိုပိုင် ပြင်သစ်လူမျိုး Guianese Creole လူမျိုးစု Carribean နှင့်တောင်အမေရိကမိသားစုအမြစ်အတူ။ ပြင်သစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သော်လည်း Saint-Maximin သည်သူ၏မိသားစုမှဂိုင်ယာနာနိုင်ငံ (သူ့မိခင်ဘက်မှ) နှင့် Guadeloupe (သူ့အဖေဘက်မှ) မှသူ၏မိသားစုမှဆင်းသက်လာသည်။
ချမ်းသာသောမိဘများမှမွေးဖွားလာခြင်းကစိန့်မက်မက်လင်းမ်အားဘဝကိုတောက်ပစေခဲ့သည်။ သူသည်လူလတ်တန်းစားမိသားစုနောက်ခံတွင်ကြီးပြင်းခဲ့ပြီးကလေးဘဝကတည်းကအလွန်အဆင်ပြေခဲ့သည်။ Allan Saint-Maximin ၏မိဘများသည်အကောင်းဆုံးဘဏ္educationာရေးပညာကိုရရှိခဲ့ကြပြီးငွေနှင့်ဘယ်သောအခါမျှရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ မင်းသိလား?… သူ၏အမေသည်တစ်ချိန်ကပညာရေးဒါရိုက်တာ'' သူ့အဖေအဲလက်စ်ဟာပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်မှာရှိတဲ့ Paris Diderot တက္ကသိုလ်မှာရုံးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေတုန်းပဲရစ် Suburbs မှာရှိတဲ့လူကြိုက်များတဲ့ကျောင်းတစ်ခုမှာ '။ မိဘနှစ်ပါးစလုံးသည်သူတို့၏ကလေးများကိုခရစ်ယာန်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်အရကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။
အစောပိုင်းနှစ်များ: Allan Saint-Maximin သည်ကလေးသုံးယောက်အနက်အငယ်ဆုံးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ သူ့တွင်အစ်ကိုကြီး Kurtys အမည်ရှိသောညီတစ် ဦး ရှိပြီးသူရေးသားသောအချိန်တွင်အမည်ကိုမသိရသေးပါ။ Meudon မြို့မှာကြီးပြင်းလာတဲ့ Saint-Maximin လူငယ်ဟာ ၀ တ်စားဆင်ယင်ခြင်းနဲ့ကခုန်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘ ၀ ကိုခေတ်ဆန်သောချဉ်းကပ်ပုံကသူသည်ခေါင်းစီးများနှင့်အစောပိုင်းသဏ္takingာန်တူသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို Allan Saint-Maximin ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ သူ၏ကလေးဘဝဓာတ်ပုံကအားလုံးကိုဖော်ပြသည်။ Credit: DailyMail
Allan Saint-Maximin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
Saint-Maximin ၏မိဘများနှင့်ကျောင်းဆရာများကသူကြီးပြင်းလာစဉ်တွင်သူ့ကိုထူးချွန်စေရန်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုပေးခဲ့သည်။ ထိုစဉ်ကကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျောင်းသို့အိမ်မှထွက်ခွာသည့်အခါတိုင်း Allan ကိုသူ့မိခင်များက 10 ယူရိုကိုပေးခဲ့သည်။ သူဟာပိုက်ဆံတွေကိုသကြားလုံးတွေ ၀ ယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်။သူ၏အစောပိုင်းရက်ရောမှု၏နိမိတ်လက္ခဏာ)။ Saint-Maximin သည်ကျောင်းတွင်ရှိစဉ်အားကစားနှင့်ဘောလုံးအားကစားတွင်နည်းပြတစ် ဦး သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်စရာမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင် ထပ်မံ၍ အသုံးချခဲ့သည်။ သူကတစ်ချိန်ကသူကပြောသည်;
"ငါ့အခွက်တဆယ်ငါ့ထံသို့သဘာဝကျကျလာ၏။ ငါနေရာတိုင်း၊ ကျောင်း၊ အိမ်မှာစသည်ဖြင့်ဘောလုံးကိုယူခဲ့တယ်။ ဒါဟာငါလိုချင်တဲ့နည်းလမ်းပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သင်ခဲ့ရတယ်။ ”
အားကစားဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများအနက်အားကစားသမားဖြစ်သည်။ သူသည်ကလေးဘဝကတည်းကဖြစ်ခဲ့သောပြေးပြေးခြင်းအတွက်သဘာဝစွမ်းရည်ကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်အားကစားကိုဘောလုံးအားအသုံးချခဲ့သည်။ သူသည်ထိုအချိန်ကဘောလုံးသမားဖြစ်လိုသောသူ၏အစ်ကို Kurtys နှင့်အတူကစားခဲ့သည်။ Saint-Maximin သည်အစောပိုင်းကတည်းကသူ၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုယုံကြည်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်သူသည်ကျွမ်းကျင်မှုရှိရန်စွမ်းရည်ရှိသည်ဟုသူ့ကိုယုံကြည်စေသည်။
သူ၏အစ်ကိုနှင့် တွဲဖက်၍ Saint-Maximin ၏ပထမဆုံးတာ ၀ န်မှာဘောလုံးဘောလုံးနှင့်ထူးခြားသောအရာများကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ သူသည်ဘောလုံးအသင်းအခွင့်အလမ်းနည်းပါးသောနေရာမှယောက်ျားလေးများမှထွက်ခွာသွားခြင်း၏အမည်ဖြင့်သူလုပ်ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်အမျိုးသားတစ် ဦး သည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှကွန်ကရစ်နှင့်မြက်ခင်းပြင်၌ကျွမ်းကျင်မှုများကိုစတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ Saint-Maximin သည်သူ၏အစ်ကိုအသက် (၂ နှစ်မှ ၃ နှစ်အရွယ်) တွင်ယောက်ျားလေးများနှင့်ကစားခဲ့သည်။
Saint-Maximin ၏ထူးခြားသောမြန်နှုန်းသည် dribbling ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူသူ့ရပ်ကွက်ရှိအခြားယောက်ျားများထက် ပို၍ သာလွန်သည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ အတော်များများကနည်းပြများမဟုတ်သောလမ်းပေါ်မှဘောလုံးသမားသည်Verrières-le-Buisson, ဒေသခံကလပ်နှင့်အတူရုံးတင်စစ်ဆေးရန်အခွင့်အလမ်းရခဲ့သည် 34 မိ drive ကိုနှင့် 10.8km သူ့မိသားစုအိမ်ကနေ။ ထိုအချိန်မှာ ညီအစ်ကိုနှစ် ဦး စလုံး (ပထမ ဦး ဆုံး Kurtys) အောင်မြင်ခဲ့သည် အဆိုပါအကယ်ဒမီ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်း Saint-Maximin's မိသားစု ၀ င်များသည်အကန့်အသတ်မရှိရှိကြသည်။
Allan Saint-Maximin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
ငယ်စဉ်က Saint-Maximin သည်လူငယ်ကလပ်များဖြစ်သော Verriere-le-Buisson ၌သူ၏ကုန်သွယ်မှုကိုလအနည်းငယ်အကြာ US Ris-Orangis သို့မပြောင်းရွှေ့မီကန ဦး လေ့လာခဲ့သည်။ 55 မိ Meudon ရှိသူ၏မိသားစုအိမ်မှ / (34.5 km) မောင်းနှင်သည်။ ကလပ်မှာဆရာနှစ်ယောက်ကဂရုစိုက်တယ်၊ Jean-Louis Lessard နှင့် Didier Demonchy။ Saint-Maximin သည်သူ၏ဆရာFrédéric Ferreira ၏3စာလုံးပေါင်းကာလအတွင်းကစားခဲ့သည်။
လူအများမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းသူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အစကောင်းခဲ့သည်။ Saint-Maximin သည်သူ၏အမြဲတမ်းပြသမှုကြောင့်စောင့်ကြည့်ရန်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့သည် အရှိန်အဟုန်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှု။ ဤအပြုအမူသည် 2007 တွင်သူသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ ACBB (Athletic Club de Boulogne-Billancourt) အမည်ရှိအကယ်ဒမီကျောင်းသို့တက်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။
ACBB သည်အကယ်ဒမီတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲမိဘများအားလုံးသည်ကလေးများအားစာရင်းသွင်းလိုသောအားကစားအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကယ်ဒမီဟာကစားသမားတွေကိုပြင်သစ်ကလပ်အသင်းတွေဆီပရိုဂျက်တာအတွက်နာမည်ကောင်းရထားလို့ပဲ။ Hatem Ben Arfa, Yacine Bammou, အမည်ကိုဖော်ပြရန်မှာအနည်းငယ်သာကလပ်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။
Allan Saint-Maximin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - Fame မှလမ်း
Saint-Maximin သည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သို့ကြီးပြင်းလာသည်နှင့်အမျှသူ၌ကစားရန်စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည် ပရီးမီးယားလိဂ်။ အဲ့ဒီတုန်းကအာဆင်နယ်အသင်းဟာပြင်သစ်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကိုဆက်ကြည့်နေတယ် သီယာရီအွန်နရီ ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်တစ်နေ့လုံး
သူ၏အိပ်မက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ကြယ်ပွင့်သည်အစဉ်အမြဲအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မိမိအ dribbles နှင့်အရှိန်အဟုန်နှင့်အတူမိမိကိုမိမိထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းဖြင့်ဖော်ပြ။ မိမိအစုံတွဲများအကြားကသူ့ထူးခြားမှုကိုရှင်းပြ, Saint-Maximin တစ်ချိန်ကဆိုပါတယ်;
“ အကယ်ဒမီမှာသူတို့ကလက်တစ်ချောင်း၊ ကျွန်တော့်ကိုမတူကွဲပြားစွာကြီးပြင်းလာတာကိုလူတိုင်းကသတိပြုမိသည်။ ငါအများကြီး dribbled နှင့်ပိုကြီးနှင့်ပိုမိုအားကောင်းယောက်ျားလေးများဆန့်ကျင်ကစားရန်ပြောတယ်။ သူတို့ကိုငါဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုတာသင်ယူခဲ့တယ်၊
ထိုအချိန်ကသူ၏နည်းပြ၊ Guillaume Sabatier, သူ့ပတ်ပတ်လည်ကသူ့အသင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးယှဉ်ပြိုင်ကစားရသည့်ဂိမ်းတွင်အယ်လန် Saint-Maximin သည် 8 ဂိုးများဖြင့်အထင်ကြီးစေခဲ့သည်။ သူသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလူသစ်စုဆောင်းသူများအကြားတွင်နာမည်ကြီးခဲ့သည်။ မကြာမီတွင် Saint-Maximin သည် 2013 ၌အကယ်ဒမီဘွဲ့ယူရန်စိတ်ချရသောလမ်းကိုပေးသော Saint-Étienneအသင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်သူ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအကြီးမားဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့သည်။
At Saint-Étienne B, Saint-Maximin သည်သူတို့၏အပြောင်မြောက်ဆုံးကစားသမားများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်သူ့ကိုသူ၏ပြင်သစ်အမျိုးသားခေါ်ဆိုမှုမှရရှိစေသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကလပ်၏အကြီးတန်းကစားသမားအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်ပြင်သစ်ပါရမီရှင်များကစားရန်အချိန်အလုံအလောက်မရရှိနိုင်ပါ။ မိုနာကိုသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့သောကြောင့် Saint-Maximin သည် Bernardo ဆေးလ်ဗား, အန်သိုနီစစ်အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် ဇွာ Moutinho သူတို့ရဲ့အင်အားကြီးရဲ့အထွတ်အထိပ်မှာနေသော။
Allan Saint-Maximin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - Fame မှထလော့
ချေးငွေအပေါ် Moving အားကစားကလပ် Bastiais Saint-Maximin အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်ပိုက်ဆံမပေးရုံသာမက 2017 နွေရာသီတွင် Nice ကိုမိုနာကိုမှလက်မှတ်ထိုးရန်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းသည်။
Nice တွင် Saint-Maximin သည်အပြင်းအထန်အပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပက်ထရစ်ဗီရာလက်အောက်ရှိကလပ်၏အဓိကကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကနယူးကာဆယ်ယူနိုက်တက်မန်နေဂျာဘရုစ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့်လူစား ၀ င်ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုထိုင်ခုံပေါ်ကနေဖယ်ထုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
Saint-Maximin ရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အိပ်မက်တွေဟာနောက်ဆုံးမှာသြဂုတ်လ2ရဲ့နယူးကာဆယ်အသင်းကိုသူရောက်ရှိလာပြီးနောက်မှာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ 2019 / 2019 ရာသီသို့ ၀ င်ဆံပင်ရွှေရောင်ပါသောမိမိကိုယ်ကိုပုံစံပြုသည့်ဘောလုံးသမားသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပရိသတ်များကိုစတင်ခဲ့သည်။ Saint-Maximin သည်ပရီးမီးယားလိဂ်၏ခံစစ်ကိုသူ၏စွန့်စားတီထွင်မှုများကြောင့်အသည်းကွဲခဲ့သည်။
Allan Saint-Maximin သည်သူ၏ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီတွင်ပရိသတ်များအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ Image Credit: DailyMail
Saint-Maximin သည်ဘောလုံးနှင့်အတူရှိနေစဉ်သူဘာလုပ်မည်ကိုသင်သိသည်။ လှည့်လှည့်, လှည့်, feint, swerve, အတိတ်ပြိုင်ဘက် dribble နှင့်သူ၏ခြေထောက်ပူးတွဲဘောလုံးနှင့်အတူရှေ့သို့မောင်း။ သူ့ကိုရပ်တန့်ခြင်းသည်နောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်။
အပေါ်ကဗီဒီယိုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Saint-Maximin ဆိုတာသေချာတယ် 'Jack ' box ထဲမှာ။ မိမိအ dribbling စွမ်းရည်များနှင့်ပရိယာယ်အပြင် (မိမိအအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်မှောငျ၌), အစွမ်းထက်တောင်ပံကစားသမားပါရဂူပြန်လည်ထူထောင်ဖို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်အများကြီးပိုင်ဆိုင်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုအထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်သည်။
စတားမက်ဆင်လင်းသည်နယူးကာဆယ်လ်အသင်း၏အရေးအကြီးဆုံးကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလိဂ်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ကြီးမားသောဘောလုံးပရိသတ်များသည်သူတို့၏မျက်လုံးရှေ့မှောက်၌ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအရည်အချင်းရှိကလေးငယ်တစ် ဦး ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမြင်တွေ့ရမည့်အချိန်တွင်ရှိနေသည်မှာသေချာသည်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့, သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Allan Saint-Maximin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - relationship ဘဝ
သူ၏ကျော်ကြားမှုကိုမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူနယူးကာဆယ်ပရိသတ်အများစုသည် Allan Saint-Maximin သည်လက်ထပ်ပြီးသူ၏ဇနီးနှင့်အတူရှိနေသေးသည်လား၊ ဟုတ်သည်! သူ၏ချစ်စရာရုပ်သွင်နှင့်ကစားပုံစတိုင်နှင့် တွဲ၍ သူ၏ချစ်သူရည်းစား wannabe ၏ဆန္ဒစာရင်းတွင်သူ့ကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်ဟုငြင်းဆိုခြင်းမရှိပါ။
WTFoot ၏အဆိုအရပြင်သစ်လူမျိုးသည်ဂျာမန်ကလပ် (Hannover 2015) နှင့်အတူရှိစဉ် 96 အနီးတွင် Margaux အမည်ရှိမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ချိန်းတွေ့သည်ဟုစွပ်စွဲခံခဲ့ရသည် အစီရင်ခံစာများအရ Margaux သည်ယခုအခါသူ၏ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သွားသည်။
တစ်ခါက Allan Saint-Maximin သည် Margaux နှင့်ချိန်းတွေ့သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ Image ကို Credit: WTFoot
စာရေးနေစဉ် Allan Saint-Maximin သည်သူချစ်သောသမီးနှစ် ဦး (Lyana နှင့် Ninhia) နှင့်သူ၏မင်းသမီးများဟုခေါ်ဆိုခြင်းခံရသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမိန်းကလေးများ၏ဆံပင်၏စေ့စပ်ကျစ်လစ်ခြင်းသည်သူတို့၏ဖခင်၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်စင်ကြယ်သောရောင်ပြန်ဟပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံ၏ဘယ်ဘက်တွင်လှပသော Lyana (ဘယ်ဘက်) နှင့် Ninhia (ညာ) သည်သူတို့စူပါဖခင်၏သက်တောင့်သက်သာရှိသောပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Allan Saint-Maximin ၏သမီးများဖြစ်သော Lyana နှင့် Ninhia နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ Image Credit: TheTimesUK
Allan Saint-Maximin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Allan Saint-Maximin ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကိုသူ၏အစေးပေါ်ကလှည့်ကွက်များနှင့်လှည့်ကွက်များနှင့်ဝေးရာကိုသိကျွမ်းခြင်းကသူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာရှုမြင်နိုင်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
အဲဒီမှာချွတ်စတင်ခြင်း သူ၏စွမ်းရည်များ၊ ရတနာများနှင့်ဒီဇိုင်နာတံဆိပ်များထက်သူ့အတွက်အမှန်ပင်အများကြီးဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့! သူကသူကသာဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုထင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Saint-Maximin ဆိုတာတကယ်တော့လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့သာမန်လူတစ်ယောက်ပါ။ မိမိကိုမိမိရှေ့မှာအခြားသူများကိုချပြီး။ ဘီဘီစီနှင့်ပြောဆိုခြင်း Saint-Maximin သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရာအားလုံးကိုကွင်းကွင်း၌ပြုလုပ်လိုခြင်း၊ ပရိသတ်များအားပျော်ရွှင်စေခြင်း၊ အခြားသောအသင်းဖော်များအားကူညီခြင်းနှင့်ဂိုးသွင်းရန်မရည်ရွယ်ခြင်းစသည်တို့ကိုကမ္ဘာသို့သိစေခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုအထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်သည်။
နယူးကာဆယ်နှင့်တစ်လအကြာအင်္ဂလန်အရှေ့မြောက်ပရိတ်သတ်များသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ကြယ်ပွင့်အားဂုဏ်ပြုရန်နည်းလမ်းများကြံစည်ခဲ့ကြသည်။ Saint-Maximin သည်သူ၏နာမည်တွင်လူကြိုက်များသောရူပဗေဒတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်ပွဲစဉ်များအတွင်းသာမကကလပ်များအပါအဝင်နေရာတိုင်းတွင်ဆိုသောသီချင်းဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုနားထောင်;
ပရိသတ်အများအပြားအတွက်ဒီမျိုးဆက်ထဲမှာ Saint-Maximin လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ကစားသမားရှိခြင်းဟာအလွန်လှပသောအရာတစ်ခုပါပဲ။ သူသည်နယူးကာဆယ်မိဘများသည်ကြီးပြင်းလာသောအခါသူတို့၏ကလေးများကိုအတုခိုးစေလိုသည့်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့်သူဖြစ်သည်။ စိန့်မက်ကလင်းမန်းသည်ပရိသတ်အနည်းငယ်မှသူ၏ဓမ္မသီချင်းကိုအလွတ်ကျက်။ အားပေးမှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိဘဲသီဆိုခြင်း.
Allan Saint-Maximin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မိသားစုဘဝ
စာရေးချိန်တွင်အယ်လန် Saint-Maximin သည်သူ၏ဘောလုံးအားကစားကြောင့်မိသားစု၏အတိတ်ကိုအတိတ်သို့ပြန်လှည့်လိုက်သည်။ သူ၏မိဘများသည်မီဒီယာအာရုံကိုရှောင်ရှားရန်သတိရှိရှိကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ သူ၏ဇနီး၊ အစ်မနှင့်မိသားစု ၀ င်များ၏မှတ်တမ်းကိုဖုံးကွယ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့သည်မိမိတို့ဘဝများထဲမှတစ်ခုသည်စူပါစတားတစ်ခုဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့၏ဘဝ၏အကောင်းဆုံးအချိန်များကိုရရှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘောလုံးသမားမလုပ်သူ Kurtys သည်သူ၏ညီငယ်အားသူ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအကြံပေးအဖြစ်လုပ်ကိုင်သည်။
Saint-Maximin သည်သူ၏မိသားစု ၀ င်များသည်ဆင်းရဲချို့တဲ့သူများအားအလှူငွေများပေးသည့်အခါပျော်သည်. မင်းသိလား?… သူဟာ Tyneside ကိုရောက်တုန်းကသူလုပ်ခဲ့တာတွေထဲကတစ်ခုကဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံဖို့နဲ့ NUFC Fans Food Bank ကိုသွားဖို့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီနေရာကအင်္ဂလန်အရှေ့မြောက်ဒေသတွေမှာအကြီးအကျယ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကိုထင်ဟပ်စေတယ်။ မီဒီယာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည်သူ့သမီးများအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ Lyana နှင့် Ninhia တို့သည်သူတို့၏အလှူငွေများစဉ်အတွင်း။
Allan Saint-Maximin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - လူနေမှုပုံစံစတဲ့
Allan Saint-Maximin ရဲ့လူနေမှုပုံစံကိုသိကျွမ်းလာခြင်းကသူ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုအပြည့်အ ၀ နားလည်အောင်ကူညီလိမ့်မယ်။
တစ်နှစ်လျှင်ယူရို 2,000,000 ၀ င်ငွေနှင့်အပတ်စဉ်လုပ်အားခယူရို€ 38.462 (စာရေးချိန်တွင်) သည်သူ့ကိုသန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်စေမည်မှာသေချာသည်။ ဇိမ်ခံဘဝပုံစံတစ်ခုအရိပ်အယောင်. စတိုင် - သတိရှိသောဘောလုံးသမားသည်အလွယ်တကူမြင်တွေ့နိုင်သောစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောဘဝပုံစံကိုပိုင်ဆိုင်သည် $ 151,600 (တန်ဖိုးရှိသောဇိမ်ခံကားများ)နှစ်ပတ်ခွဲကြာသူ၏လစာ).
Allan Saint-Maximin ကား
ဒါ့အပြင်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အပေါ် you နဲ့ငါ Saint-Maximin မှာထူးခြားတဲ့ဖက်ရှင်ကျမှုရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးကစားခြင်းရဲ့အစမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း။ The ပြင်သစ်လူမျိုးသည်ဖက်ရှင်သူရဲကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်အစေးပေါ်၌သာမကကျော်ကြားမှုကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းနှစ်သက်သောသူဖြစ်သည်။ သူ၏အစောပိုင်းနှစ်များအတွင်းလေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်းဒီဇိုင်နာ (အထူးသဖြင့်ခေါင်းကိုက်။ ) ဝတ်ဆင်ခြင်းသည်သူ၏အစောပိုင်းကာလများမှစတင်ကာသူ၏လက်မှတ်အသွင်အပြင်ဖြစ်သည်။
Allan Saint-Maximin လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဟာဒီနေ့မစဘူး။ Image Credit: Instagram
Allan Saint-Maximin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မရေမတွက်အချက်အလက်
သူ၏ Headband Designers Sticker ကိုဖုံးရန်ပြောကြားခဲ့သည်။ မင်းသိလား?… စပွန်ဆာပေးသောစည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်နယူးကာဆယ်လ်ကြယ်ပွင့် Allan Saint-Maximin သည်£ 180 Gucci ၏ခေါင်းကို STICKER ဖြင့်ဖုံးအုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအခိုက်အတန့်တွင်လှည့်စားသောကစားသမားသည် Gucci လိုဂိုပေါ်တွင်အဖြူရောင်တိပ်ခွေတစ်ခုကိုကပ်ထားရသည်။
Allan Saint-Maximin သည်သူ၏ပေါင် ၁၈၀ Gucci headband ကိုကွင်းအတွင်းကစားစဉ်အတင်းအကျပ်ဖုံးအုပ်ခိုင်းသည်။ Image Credit: TheSun
ပရိသတ်များအတွက် Allan Saint-Maximin ၏ Tattoo: ထားရှိခြင်း စူပါဟီးရိုးတက်တူးများသည်စိတ်ပျက်အားလျော့စေသောပရိသတ်အတွက်မဟုတ်ပါ။ Allan Saint-Maximin ၏သဏ္ာန်သည်သူ၌စူပါဟီးရိုးပန်ကာအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုရရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ပရိသတ်တွေ (အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့) ဟာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်အမြဲတမ်းမျက်နှာပေါ်တက်တူးထိုးထားခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလူသိများအောင်လုပ်ဖို့စိတ်မထားဘူး။
ဘာလဲ နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် Allan Saint-Maximin သည်ထူးခြားသောလေ့ကျင့်ခန်းမဟာဗျူဟာကို အသုံးပြု၍ ပုံသဏ္getာန်နှင့်အညီနေထိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ စတိုင်ကျသောဘောလုံးသမားသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရန်ပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ Saint-Maximin သည်သူ၏လှေကားထစ်များကိုမိမိကိုယ်ကိုမွေ့လျော်ရန်အထူးနည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ပြန်ပြေး။ ကြိုက်သည်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်ုပ်တို့၏ Allan Saint-Maximin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အကြောင်းမရေရာသည့်အတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုဖတ်ရှုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ At LifeBogger, ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုအတွက်ကြိုးစားသည်။ မမှန်ကန်သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်တွေ့ရှိပါကအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေပါ။ သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားလေးစားမည်။
Luuk de Jong ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Aleksandar Mitrovic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်